जाने हैन त घले राजाको घलेगाउँ ‘रेड भिलेज’ हेर्न ? «
जाने हैन त घले राजाको घलेगाउँ ‘रेड भिलेज’ हेर्न ?
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार १२:०६
सार्क राष्ट्रकै नमुना गाउँको रुपमा परिचित लमजुङको घले गाउँ अब ‘रेड भिलेज’(रातो गाउँ) मा परिणत हुँदैछ । सात शताब्दीअघिको यो पर्यटकीय गाउँका सबै घरहरु कालो ढुंगाले छाइएका छन् । तर, नमुना गाउँको परिचय भने अब फेरिँदैछ । घले गाउँका एक सय २५ वटा घरमा छाइएका काला ढुंगालाई रातो जस्ताले विस्थापन गर्दैछ । ८० घरमा गुरुङ र बाँकी ४५ घरमा दलितहरुको बसोबास छ । दुई दशकअघि होमस्टे सुरुवात गरेको यो गाउँमा अहिले ३५ वटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् ।
क्होलासोथर गाउँपालिका-३ को घले गाउँलाई रातो जस्ताले रंग्याउन ७५ लाख खर्च गरिने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम घले भन्छन्, “सके यही चालु आर्थिक वर्षमा नसके अर्को वर्षभित्र सबै घरहरु जस्ताले छाउनेछौँ ।”
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यो गाउँ करिब सात सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । चौबिसे राज्यकालमा घले राजाले यस ठाउँमा शासन गरेका थिए । तीनै राजाको नामबाट यस गाउँको नाम घले गाउँ राखिएको हो ।पुर्खाको सम्मानका लागि स्थानीयबासीले घले राजाको शालिकसहित पार्कको निर्माण गरेका छन् भने गाउँमै गुरुङ संस्कृतिको ज्वलन्त चित्रण गर्ने सार्क भिलेज पर्यटन संग्रहालय पनि स्थापना गरिएको छ ।
राजाको नाममा राखिएको यस गाउँले मौलिकतात गुमाउँदैन ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, “हामीले नमुना गाउँ बनाउन लागेका हौँ, संरक्षण गर्न खोजिएको हो ।” उसो त यो वडामा मात्र कुल २ सय ५५ घरहरु छन् । प्राय: घरहरु थरीथरीका ढुंगाले छाइएका छन् ।